Akụkọ - Mgbakasị ọgwụgwọ ọkụ na nhazi ọkwa nke ọgba tum tum
Nchegbu ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ na nhazi ọkwa nke ọgba tum tum
Enwere ike ikewa nrụgide ọgwụgwọ ọkụ na nrụgide ọkụ na nrụgide anụ ahụ. Mgbanwe ọgwụgwọ ọkụ nke arụ ọrụ ahụ bụ nsonaazụ nke ngwakọta nke nrụgide ọkụ na nrụgide anụ ahụ. Ọnọdụ nke nrụgide ọgwụgwọ ọkụ na arụ ọrụ na mmetụta ọ na-akpata dị iche iche. A na-akpọ nrụgide dị n'ime nke kpo oku ma ọ bụ obi jụrụ oyi a na-akpọ nrụgide dị ọkụ; nrụgide dị n'ime nke oge na-enweghị atụ nke mgbanwe anụ ahụ na-akpọ nrụgide anụ ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-akpọ nrụgide dị n'ime nke mgbanwe na-enweghị isi nke usoro dị n'ime ihe arụ na-akpata nrụgide. Ọnọdụ nrụgide ikpeazụ na nha nrụgide nke arụ ọrụ mgbe a gwọchara ya ọkụ na-adabere na nchikota nrụgide ọkụ, nrụgide anụ ahụ na nrụgide ndị ọzọ, nke a na-akpọ nrụgide fọdụrụnụ.
Mgbanwe na mgbawa nke ihe eji arụ ọrụ n'oge ọgwụgwọ ọkụ bụ ihe nsonaazụ nke nrụgide dị n'ime a. N'otu oge, n'okpuru mmetụta nke nrụgide ọgwụgwọ ọgwụgwọ, mgbe ụfọdụ, otu akụkụ nke ihe a na-arụ na-enwe nrụgide nrụgide, akụkụ nke ọzọ na-enwekwa ọnọdụ nrụgide, na mgbe ụfọdụ ikesa ọnọdụ nrụgide nke akụkụ ọ bụla. nke workpiece nwere ike ịbụ nnọọ mgbagwoju anya. Ekwesịrị nyochaa nke a dabere n'ọnọdụ ahụ n'ezie.
1. Nsogbu na-ekpo ọkụ
Nsogbu na-ekpo ọkụ bụ nrụgide dị n'ime nke mgbasawanye na mkpumkpu na-enweghị oke na-akpata site na ọdịiche dị na kpo oku ma ọ bụ ịdị jụụ n'etiti elu nke ihe ọrụ na etiti ma ọ bụ akụkụ dị warara na oke n'oge ọgwụgwọ ọkụ. N'ozuzu, ngwa ngwa nke kpo oku ma ọ bụ obi jụrụ, ka nrụgide nrụpụta ka ukwuu.
2. Nsogbu anụ ahụ
Nsogbu dị n'ime nke oge na-adịghị agbanwe agbanwe nke mgbanwe mgbanwe olu na-akpata site na mgbanwe nke oge a na-akpọ nrụgide anụ ahụ, nke a na-akpọ nchekasị mgbanwe mgbanwe oge. N'ozuzu, nnukwu olu a kapịrị ọnụ tupu na mgbe mgbanwe nke ngwongwo anụ ahụ na nke ukwuu oge dị iche n'etiti ntụgharị ahụ, nrụgide anụ ahụ ka ukwuu.
Post oge: Jul-07-2020